အာရှဖလား ယူအေအီးနှင့် အီရန် ကွာတားတက် | DVB
အာရှဖလား ယူအေအီးနှင့် အီရန် ကွာတားတက်
CANBERRA-AUSTRALIA- Sayed Mohamed Jaffar #1 of Bahrain looks the ball during The AFC Asian Cup match between BHR v UAE at the Canberra Stadium on January 15, 2015. Picture by Thananuwat Srirasant/WSG.
CANBERRA-AUSTRALIA- Omar Abdulrahman #10 of UAE with the ball during The AFC Asian Cup match between BHR v UAE at the Canberra Stadium on January 15, 2015. Picture by Thananuwat Srirasant/WSG.
CANBERRA-AUSTRALIA- Jaycee John #14 of Bahrain competes for the ball during The AFC Asian Cup match between BHR v UAE at the Canberra Stadium on January 15, 2015. Picture by Thananuwat Srirasant/WSG.
CANBERRA-AUSTRALIA- Jaycee John #14 of Bahrain celebrates the goal during The AFC Asian Cup match between BHR v UAE at the Canberra Stadium on January 15, 2015. Picture by Thananuwat Srirasant/WSG.
CANBERRA-AUSTRALIA- UAE player celebrates the goal during The AFC Asian Cup match between BHR v UAE at the Canberra Stadium on January 15, 2015. Picture by Thananuwat Srirasant/WSG.
SYDNEY-AUSTRALIA-Javad Nekonam , No6of Iran and Mohammed Muntari, no 19 of Qatar in action during Iran V’s Qatar match the AFC Asian Cup at Stadium Australia on January 15, 2015. Picture by Paul Lakatos/WSG.
SYDNEY-AUSTRALIA-Ibrahim Majed of Qatar, No 13, tumbles ahead of Askhan Dejagah, No 21 of Iran during the Iran V’s Qatar match action during the AFC Asian Cup at Stadium Australia on January 15, 2015. Picture by Paul Lakatos/WSG.
SYDNEY-AUSTRALIA-Sadar Azmoun of Iran, No 20 and Hasan Al Haydos of Qatar, No 11 during Iran V’s Qatar match action during the AFC Asian Cup at Stadium Australia on January 15, 2015. Picture by Paul Lakatos/WSG.
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ အာရှဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စု (ဂ) ပွဲစဉ်မှာ ယူအေအီးက ဘာရိန်းအသင်းကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရသွားပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ယူအေအီးအသင်းက ပွဲစပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အဖွင့်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့အတွက် အာရှ ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ အမြန်ဆုံး ဂိုးတဂိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတွက် ယူအေအီးအသင်းက ၂ ပွဲကစား ၂ပွဲနိုင် ၆ မှတ်နဲ့ အုပ်စု ပထမနဲ့ ကွားတား ဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ အီရန်နဲ့ ကာတာ အသင်းပွဲစဉ်မှာတော့ အီရန်က ကာတာအသင်းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်သွားပါတယ်။
ဒီအတွက် အီရန် အသင်းက ၂ ပွဲကစား ၂ ပွဲနိုင် ၆ မှတ်နဲ့ အုပ်စု ပထမနဲ့ ကွားတား ဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယူအေအီး-ဘာရိန်း (ဓာတ်ပုံ – AFC)
ကာတ-အီရန် (ဓာတ်ပုံ – AFC)
Previous story အမေရိကန်လွှတ်တော်ကို တိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်သူ ဖမ်းဆီးခံရ
Next story အမေရိကန် စစ်ပြန်တဦးကို လူသတ်မှုဖြင့် သေဒဏ်ပေး